Nightlife indasitiri uye COVID inogona kubatana
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » tsika nemagariro » Nightlife indasitiri uye COVID inogona kubatana
Nhau Nhau • Kuputsa Nhau dzeEurope • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • tsika nemagariro • Health News • Musangano Weindasitiri Nhau • nhau • Kuvakazve • Kutarisirwa • Spain Kuputsa Nhau • Technology • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Kurasikirwa kwehupfumi kuri kutarisana neindasitiri yehusiku uye mhedzisiro yaro yakanangana nemamwe maindasitiri akadai kushanya kwakakonzera kukuvara kukuru
2020 yaunza a kushomeka kwakakwana kwezivo uye kushomeka nezvehutachiona hwave denda, pakati pezana ramakumi maviri nemasere
SieXsein Global yakazvarwa kubva kumubatanidzwa wepasi rose weboka revanyanzvi vane nhoroondo refu mumaindasitiri eminda
Iyo indasitiri yehupenyu hweusiku inogona kuva mhinduro kudenda razvino nekuti inogona kuve yekutanga yekuziva sosi pamwe chete nezviremera zvinodzora uye kuita sechiedza chekudzivirira hutachiona
Chaizvoizvo rimwe gore rapfuura, nzvimbo dzehusiku pasi rese dzakamanikidzwa kuvhara madhoo avo mukumuka kwekukurumidza kupararira kwecoronavirus. Kwete nzvimbo dzakakanganiswa chete asi mamwe emitambo yakakosha yemimhanzi yakadai seCoachella, Ultra Music Festival, Tomorrowland Winter uye Snowbombing yakanga yazivisawo kudzoserwa kwayo kuitira kudzikamisa kuputika uku.
Kurasika kwehupfumi kuri kutarisana neindasitiri iyi pamwe nemhedzisiro yayo kwakanangana nemamwe maindasitiri akadai kushanya kwakakonzera kukuvadza kukuru uye rubatsiro rwakakodzera rwunokumbirwa kuhurumende yega yega haruna kuzadzikiswa, zvichisiya mabhizimusi mazhinji mukubhuroka uye nemhedzisiro yakakomba yehupfumi, pamwe nevashandi veindasitiri iyo kune chikamu chikuru chakasiiwa chakasiiwa. Mhedzisiro yekudzimiswa uku kuri kutanga kutora kutarisisa kwehurumende sezvo vazhinji vari kutambura nedambudziko guru muzana ramakore rapfuura, richivaita kuti vavhurike kutanga kumutsiridza hupfumi. Zvakachengeteka kutaura kuti hupfumi hwehusiku hunounza hukuru hwehupfumi kumaguta nenyika munyika.
Izvo 2020 zvatiunzira zvaive kushomeka kwakakwana kwezivo uye kushomeka nezvehutachiona hwave denda, pakati pezana ramakumi maviri nemasere. Nekudaro, idzi nguva dzekuyedza dzakadaidzira mubatanidzwa wakawanda kupfuura nakare kose uye dzakavhurira mikova kumasangano, masangano, uye makambani, vese vari vega uye veruzhinji kuti vabatanidze masimba uye "Tsvaga zvamunowirirana".
Izvo zvakachengeteka kutaura ndezvekuti vatambi vekirabhu havana kukwanisa kuenda kunze kwegore, zvichivaita "munzara munzanga" kunyanya mushure mekutsungirira mhedzisiro yekugara uri woga uye kutevedzera mutemo wakasimba wekudzoka kumba.
SieXsein Global yakazvarwa kubva kumubatanidzwa wepasi rose weboka revanyanzvi vane nhoroondo refu muminda senge hutano, nharaunda, tekinoroji uye maindasitiri. Chinangwa chikuru uye hunyanzvi kugadzira nzvimbo dzakachengetedzwa, nechishandiso chinoburitsa hunyanzvi kusvika 99,99% mukutonga kwehutachiona hwakavharika (senge COVID-19). Iko kusanganiswa kweana mana ekutanga masisitimu muchikwata chekusimudzira; kudzivirira hutachiona, kudzikamisa, kudzikisira, uye kuongorora, inopa 4% yekubudirira kwehuwandu kune chero sangano kana nharaunda inoda kushandisa tekinoroji.
sezvo Kusiyana nesarudzo yeSala Apolo, konzati iri kuuya yeSant Jordi haifungidzirwe semuedzo wekiriniki, asi chiitiko che "vekutengesa" sezvo varongi vatove nechivimbo chekuchengeteka kwayo. Zvakare, vanoenda kumakonzati vachange vari Rudo rwevateveri veLesbian panzvimbo pevanozvipira uye havazoyedzwa mushure mechiitiko chatiri kutaurirana pamwe chete neSieXsein Global nehurumende pasirese kusimudzira nekuvhurwa kwenzvimbo dzehusiku pasi rese idzo dziri kugamuchira mhinduro huru nekuda kwe iyo yakasarudzika yehurongwa huri kukurudzirwa.
Carmen Alvarez, CEO weSieXsein Global anga ataura, "Ndisu chete kambani yakabudirira mukubatanidza nekupa tekinoroji dzichangoburwa uye dzepasi pasi kupokana neCOVID-19 mune imwe mhinduro, zvese muSpain nepasi rese".
Kune rimwe divi, Joaquim Boadas, Secretary General we International Nightlife Association ataura, ”Kumirira dziviriro yemombe haisi sarudzo, nekuti mabhizinesi mazhinji ehusiku anenge asisipo panguva iyoyo. Ndosaka tichimanikidza kubatana kwehurumende kuratidza kuti nezviyero zvakakodzera, nzvimbo dzinogona kuvhurwa nenzira yakachengeteka ”.
Pilot kuyedzwa, chishandiso chakakosha chenguva yemberi yeindasitiri
Iyo indasitiri yehupenyu hweusiku inogona kuva mhinduro kudenda razvino nekuti inogona kuve yekutanga yekuziva sosi pamwe chete nezviremera zvinodzora uye kuita sechiedza chekudzivirira hutachiona. Kuve nekuongororwa kweECOVID kuwana nzvimbo dzehusiku dzehusiku kunogona zvakare kuwana chikamu chakakura chevanhu kuti vaongororwe pavangadai vasina kudaro. Isu tinotsigira chero bvunzo dzinoitwa munzvimbo dzekuitira uye nekuwana mhinduro dzakanakisa dzekumisazve uye indasitiri yakavharwa zvachose gore rapfuura.
Vezvenhau vanga vachiratidzira bvunzo dzakawanda dzakaitwa munzvimbo dzakadai seAmsterdam, uko vanhu chiuru nemazana matatu vakapinda mumutambo wemimhanzi kuZiggo Dome yakagadzirirwa kuongorora njodzi dzekuvhurazve nzvimbo uye kuronga kurerutswa kwezvirango zvekuvhara. Nzvimbo Sala Apolo, muBarcelona uye isiri iyo hutachiona hwevatori vechikamu mumuedzo wekutyaira wakaitwa muna Zvita apfuura.
Uyezve, vhiki ino hurumende yeCatalan uye varongi vemitambo vakazivisa konzati yekuchaira ndege muBarcelona yePalau Sant Jordi munaKurume 27. Vapindi vanofanirwa kutora bvunzo nekukurumidza uye kuongorora mune imwe yenzvimbo nhatu, kungave iyo Sala Apolo, Luz de Gas kana dzimba dzemakonzati eRazzmatazz. Ivo vanoyedza vasina kunaka vanozokwanisa kutora chikamu muchiitiko neFFP2 kumeso kumeso, asi hapana kuremara munharaunda kuchazodiwa.
Nzvimbo iyi, zvisinei, ichave yakakamurwa kuita nzvimbo ina yega yega inogamuchira vanhu vanosvika chiuru nemazana masere uye pachave nekuyedzwa kunoitwa kudzivirira kuwandisa pamusuwo nekubuda. Ichagamuchira vateereri vevanhu zviuru zvishanu (vakamira), nemiyedzo yeantigen kune vese vanopinda asi pasina kuremara munharaunda.
Kusiyana nesarudzo yeSala Apolo, konzati iri kuuya yeSant Jordi haifungidzirwe semuedzo wekiriniki, asi chiitiko che "vekutengesa" sezvo varongi vatove nechivimbo chekuchengeteka kwayo. Zvakare, vanoenda kumakonzati vanozove Rudo rwevateveri veLesbian panzvimbo pevanozvipira uye havazoyedzwa mushure mechiitiko ichi.